I-Tropical 1 BR ene-Heated Jacuzzi & Lagoon View
67 okushiwo abanye
El Gouna, i-Egypt
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Daniel
Lo mklamo wezindawo ezishisayo, i-Bali igqugquzele ifulethi elilodwa lokulala itholakala e-Water Side El Gouna. Ungakwazi ukujabulela i-jacuzzi enkulu, eyimfihlo, eshisayo ene-hydro massage, amabhamuza namajethi amanzi. Ukufinyelela okungenamkhawulo kudamu lokubhukuda elikhulu okwabelwana ngalo.
Ithala, i-jacuzzi, igumbi lokulala kanye negumbi lokuhlala konke kunombono omangalisayo, obheke echibini elimangalisayo kanye ne-Slider Wake Park.
IDolobha Eliphansi kanye ne-Marina Abu Tig, inhliziyo ye-El Gouna yokudlela, yezitolo nempilo yasebusuku, ingu-6 min kuphela ukushayela.
I-Jacuzzi enamanzi ahlanzekile, ahlanzekile agcwaliswe ngaphambi nje kokuthi ungene. Izinga lokushisa lingasethwa libe ngu-37 degrees futhi limiswe ngu-35 ngokuzenzakalelayo. Uma unezinye izintandokazi pls ungazise.
Ukufinyelela okungenamkhawulo echibini lokubhukuda elikhulu okwabelwana ngalo nje iminithi elingu-1 ukuya kwesokunxele ukusuka engadini.
Vula ikhishi lepulani elina: i-microwave, isitofu, igedlela, ifriji, isiqandisi, amabhodwe, amapani, amapuleti, izibuko nawo wonke amathuluzi okupheka adingekayo.
Igumbi lokuhlala elibanzi elinosofa omkhulu onethezekile egumbini lokuhlala elinwebeka libe ngumbhede okabili usofa.
I-TV yesikrini esiyisicaba
I-WIFI yamahhala (30 mega, fibre, ezinzile futhi iyashesha nge-Orange Triple Play)
Isitezi esinetafula lokudlela elihle, elingaphandle, indawo yokuhlala izivakashi ezingu-4 nokubukeka okuhle.
Igumbi lokulala elikhulu elinombhede kasayizi wendlovukazi, ikhabethe lezingubo, i-AC nefasitela elinokubukwa kwamanzi.
Igumbi lokugezela elineshawa
Izikhwama zikabhontshisi ezimbili ezilula engadini ezingasetshenziswa edamini
Ukupaka eduze kwebhilidi.
Umshini wokuwasha, i-ayina kanye nebhodi loku-ayina kuyatholakala.
Wonke amagumbi afakwe i-AC.
Ngifuna uzizwe usekhaya, ngakho-ke ngihlinzeka ngamathawula ahlanzekile, amashidi, imicamelo namaduvet. Zonke ziwashwe elondolo lochwepheshe.
Ifulethi lithule kakhulu, lesimanje futhi licocekile.
4.84 ·67 okushiwo abanye
4.84 · 67 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-67
Itholakala kahle imizuzu engu-6 ukushayela usuka e-Marina Abu Tig naseDowntown futhi ngakwesokudla eduze kwe-Sliders Water Sports Park ene-Floating Aqua Park, i-Wake Park, Indawo yokudlela, i-Lagoon Beach, Ibha, inkundla yokudlala yezingane, ithenisi yetafula, ne-Swimming Pool.
UDaniel Ungumbungazi ovelele